Alejandra Pizarnik: iyo yakanyatso peni kuseri kwechiratidzo mumumvuri wako | Zvazvino Zvinyorwa
Juan Ortiz | | Biography, Mabhuku, Nhetembo
Mutsara naAlejandra Pizarnik
Mumakore makumi mashanu apfuura, Alejandra Pizarnik anga ari iye anonyanya kuverengerwa mudetembi weArgentina muLatin America nepasirese. Maitiro ake akasarudzika uye asingaenzaniswi akapfuura nekufamba kwenguva, kupfuura kufa kwake kunorwadza. Munyori akagadzira yepakutanga nhetembo hurukuro, inozivikanwa nemutauro wakapfuma kwazvo uye nekufukidza madingindira akaomarara enguva yake.
Kunyangwe hazvo hupenyu hwake hwaive hupfupi zvakanyanya -Akafa aine makore makumi matatu nematanhatu chete--, akakwanisa kuvaka rakasimba basa uye akasiya nhaka yemabasa akakosha kwazvo. Netsamba yako yekutanga, Nyika yevatorwa zvakanyanya (1955), Pizarnik akakunda zviuru zvevaverengi, avo vakaramba vakatendeka kusvika pabhuku rake rekupedzisira muhupenyu: Nziyo diki (1978). Pakati pematanho aakagashira, iyo Municipal Poetry Prize (1965) inomira pachena.
1 Mabhuku naAlejandra Pizarnik
1.1 Chiratidzo mumumvuri wako (1955)
1.2 Iyo yekupedzisira Innocence (1956)
1.3 Muti waDiana (1962)
1.4 Iwo Mabasa nehusiku (1965)
1.5 Ropa Rakawanda (1971)
2.3 Makore ake muParis
2.7 Inoshanda naAlejandra Pizarnik
Mabhuku naAlejandra Pizarnik
Chiratidzo mumumvuri wako (1955)
Icho chechipiri muunganidzwa wenhetembo dzakaburitswa naPizarnik. Iwo muunganidzwa wenhetembo nhanhatu dzakanakisa dzaakange anyorera kusvika zvino. Izvi zvinyorwa zvinoratidza simba uye kukurudzira kwemunyori mudiki; mavhesi akaisirwa kusagadzikana, kusava nechokwadi, kusahadzika uye mibvunzo yakawanda.
Imwe yenhetembo dzatinogona kunakidzwa mune iyi anthology ndeiyi:
“Kuzadzwa kwangu nezvikepe zvichena.
Kuva kwangu busted manzwiro.
Zvese zvangu pasi pezviyeuchidzo zve
Ndiri kuda kuparadza iko kutsva kwako
Ini ndoda kudzivirira kusagadzikana kwako
Nei chiono chako chemweya chakatenderedza tumikombe twe
awa awa? ".
Kusava nemhosva kwekupedzisira (1956)
Icho chiunganidzwa chechitatu chakapihwa nemunyori. Basa racho rine gumi nematanhatu erudo nziyo. Zvakare kune kuratidzwa kunozivikanwa kwehupenyu hwaPizarnik pachahwo, uye pane shanduko iri pachena maererano nemabasa ake ekare. Zvakare, uyu muunganidzwa une nhetembo dzakakosha dzevakadzi kubva panguva iyoyo. Pakati penhetembo dzinobuda pachena:
"Ichaputika chiwi chendangariro."
Hupenyu hunenge hwangove chiito chekutendeka.
kwemazuva asina kudzoka.
zvikara zvengarava zvinoparadza gungwa
tsamba isingazivikanwe ichawana maoko emweya ”.
Diana muti (1962)
Mubhuku rino, Pizarnik inopa makumi matatu nematatu nhetembo dzine mavhesi epachena. Basa racho Yakatangwa neNobel Prize yeMabhuku Octavio Paz. Pachiitiko ichi, madimikira akadai sekufa, kusurukirwa uye kushungurudzika zvinomira. Sezvazviri muzvikamu zvakapfuura, yega yega nhetembo inoburitsa pachena zvemukati zvemunyori, senge kushushikana kwepfungwa uye kwepfungwa. Pane ndima dzinogona kupokana zvachose.
Nhetembo dzekutanga muanthology ndedzinoti:
"Ndakaita zvekusvetuka kubva kwandiri mambakwedza.
Ndasiya muviri wangu padhuze nechiedza
uye ndakaimba kusuwa kwechazvarwa ”.
“Ndidzo shanduro dzaanotipa:
gomba, madziro anodedera… ”.
mabasa neusiku (1965)
Ndiwo muunganidzwa wenhetembo 47 dzine madingindira akasiyana siyana. Nguva, kufa, kushuva uye kurwadziwa zviri pakati pevanonyanya kutaura. Ndiro rimwe remabasa akaomesesa emunyori weArgentina, uye neiya iyo zvine simba zvinoratidza hunhetembo hwayo. Muhurukuro naMarta Isabel Moia, Pizarnik akati: “Bhuku iro rakandipa mufaro wekuwana rusununguko rwekunyora. Ndakange ndasununguka, ndaive muridzi wekuzviitira fomu sezvandaida ”.
Muenzaniso weuunganidzwa wenhetembo ndewekuti:
maziso angu makiyi,
madziro ane zvakavanzika,
mazwi angu ekutya, nhetembo.
Iwe chete ndiwe unoita ndangariro yangu
moto usingaperi ”.
Kuwanda kweropa (1971)
Icho chiri pamusoro nyaya pfupi nezve Countess Erzsébet Báthory, mukadzi anotyisa uye ane hutsinye, uyo akapara mhosva dzakaipisisa kuti arambe ari mudiki. Muzvitsauko gumi nezviviri nzira dzekutambudza dzinoshandiswa ne "mukadzi" uyu dzinotsanangurwa zvishoma nezvishoma. Iri bhuku rine mapeji makumi matanhatu nemifananidzo yakanyorwa naSantiago Carusola uye inosanganisira zvidimbu zveprose poetic mune yakanakisa dhizaini yePizarnik.
Mutongi weHungary Erzsébet Báthory anoroora Count Ferenc Nádasdy aine makore gumi nemashanu. Makumi matatu emakore gare gare, murume anofa. Panguva iyoyo, wepamusoro ane makore makumi mana nemana uye anotya kukwegura. Kudzivirira bvudzi jena kuti risasvika pauri, anotanga muhuroyi, anotakuraing ita tsika maanoshandisa ropa revasikana vadiki kuchengetedza kutsva kwayo. Zvinoenderana nezvinyorwa zvakawanikwa mukamuri rake, akatambudza nekuuraya vakadzi vanopfuura mazana matanhatu nenzira dzakasiyana.
Nyanduri Flora Alejandra Pizarnik akazvarwa musi waApril 29, 1936 muBuenos Aires, Argentina. Akauya achibva kumhuri yevapakati-veRussia vatorwa, avo pakutanga vaive nezita rekuti Pozharnik uye vakarasikirwa naro vachigara munyika yeBarça. Kubva pazera diki kwazvo aive akangwara kwazvo, kunyangwe aivewo akadaro Aizivikanwa nekuve nekusachengeteka kwakawanda nekuda kwechitarisiko chake uye nekukakama kwake.
Mushure mekupedza chikoro chesekondari, muna 1954 akapinda University of Buenos Aires, kunyanya weVadzidzisi Vedare Philosophy uye Tsamba. Asi, nguva pfupi yapfuura- yakabatana nehunhu hwake hwakasiyana- - akachinja kuita basa rekutapa nhau. Gare gare, akatanga makirasi ehunyanzvi nemupendi Juan Batlle Planas, kunyangwe akazopedzisira asiya zvese kuzvipira iye ega mukunyora.
Mumazuva ake ekuyunivhesiti, akatanga marapirwo ake naLeón Ostrov. Mukuita kudaro, akaedza kudzora kushushikana kwake uye nekuvandudza kuzvidzora kwake. Iyi misangano yaive yakakosha zvakanyanya kuhupenyu hwake uye kunyangwe nhetembo yake, nekuti akawedzera kumabasa ake ruzivo pamusoro pekusaziva uye kuzviisa pasi. "Kumuka", imwe yenhetembo dzake dzakakurumbira, yakatsaurirwa kune yake psychoanalyst.
Makore ake muParis
Mukutanga kwema60, Pizarnik aigara muParis kwemakore mana.. Panguva iyoyo aishanda mumagazini Notebooks, zvakare Akashanda semutsoropodzi uye mushanduri wemunyori. Ikoko akaenderera mberi nedzidzo yake yekudzidzira paakapinda muSybonne University, kwaakadzidza History of Religion neFrench Literature. Paivhu reParisiti zvakare akarima hushamwari hwakanakisa, pakati pazvo pakamira Julio Cortázar naOctavio Paz.
Bhuku rake rekutanga rakaburitswa pakati pe50s uye yakatumidzwa zita Nyika yevatorwa zvakanyanya (1955). Asi akatozodzoka kubva kuParis ndipo paakapa mabasa ake anomiririra - neruzivo rwekudetemba -, achiratidza musambo wake wakasimba, wekutamba uye wekugadzira. Pakati penhetembo dzake nomwe dzinobuda pachena: Diana muti (1962), mabasa neusiku (1965) uye Kubviswa kwedombo rekupenga (1968).
Pizarnik akashingawo mukati merudzi rwekurondedzera, nenyaya pfupi Kuwanda kweropa (1971). Mushure mekufa kwake, mabhuku akati wandei afa aitwa, akadai se: Chido cheshoko (1985), Zvinyorwa zveSobra uye nhetembo dzichangoburwa (1982) uye Pedzisa nhetembo (2000). Tsamba dzake uye zvinyorwa zvakanyorwa mukati Pizarnik tsamba (1998) uye Diaries (2003).
Kubva pazera diki kwazvo Pizarnik aive nekusagadzikana kwepfungwa, aine kushushikana kukuru uye kuomarara, matambudziko anoratidzwa munhetembo dzake. Pamusoro peizvi, akachengeta chakavanzika zvaunofarira pabonde; vazhinji vanopomera kuti aive ngochani uye kuti kuviga chokwadi chake kwakamubatawo zvakanyanya. Nyanduri akamurapa zvirwere nemishonga yakasiyana siyana yaaive akapindwa nayo muropa.
Chimwezve chinhu chakakanganisa hupenyu hwake nekumudzikamisa kwaive kufa kamwe kamwe kwababa vake, iyo yakaitika muna 1967. Nekuda kwenhamo iyoyo, nhetembo dzake nemadhayari zvakawedzera kusuwa, nezvinyorwa zvakaita seizvi: “Kufa kusingaperi, kukanganwa mutauro uye kurasikirwa kwemifananidzo. Ndingade sei kuve kure nekupenga uye kufa (…) Kufa kwababa vangu kwakaita kuti kufa kwangu kuve kwechokwadi ”.
Muna 1972, Pizarnik akagamuchirwa kuchipatara chepfungwa muBuenos Aires nekuda kwekuora mwoyo kwakanyanya. Musi waGunyana 25 - pandakanga ndiri paweekend yezororo -, nyanduri akamedza huwandu hukuru hwemapiritsi eSeconal uye akawandisa zvakaita kuti afe. Pabhodhi mubhodhi rake akasara angave mavhesi ake ekupedzisira:
"Ini handidi kuenda
izvo kusvika pasi ”.
Inoshanda naAlejandra Pizarnik
Nyika yevatorwa zvakanyanya (1955)
Izvo zvakarasika zviitiko (1958)
Kubviswa kwedombo rekupenga (1968)
Mazita nenhamba (1969)
Inowanikwa pakati pemalac (1969)
Musical gehena (1971)
Nziyo diki (1971)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Alejandra Pizarnik